Oppo R17 Pro ga - enwe nhazi igwefoto atọ na teknụzụ TOF | Gam akporosis
Mgbe gwa Oppo R17 ụbọchị ole na ole gara agaOppo nọ na-enwetụ ntakịrị ihe ngosipụta nke atụmatụ R17 Pro. Ikekwe ekwentị ndị a enweghị nkọwapụta dị iche iche, ọhụụ ọhụrụ nwere ike ikpughe mmelite na ngalaba foto.
Foto a na-agbaba site na ntinye ọkọnọ ekpughe na R17 Pro ga-enwe ndokwa igwefoto atọ. Ozi na-ekwu na otu n'ime ihe mmetụta ahụ ga-enwe nkwado maka teknụzụ ToF (Oge Flight).
N'ime izu ndị gara aga, onye isi ndị isi ngwaahịa nke Oppo kwupụtara na bọọdụ nkwukọrịta ToF na ngwaahịa ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-abịa na teknụzụ a. Ebe ọ bụ na a ga-ewepụta Oppo R17 Pro na Shanghai na August 23, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na nke a ga-abụ ngwaahịa a na-ekwu maka ya.
Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, R17 Pro ga-abụ mbụ commercially dịnụ ekwentị na a elu uzu enwere ike iji ya mee ihe n'ụdị dị iche iche dịka njirimara mmegharị ahụ, ọgụgụ isi na ọbụna eziokwu dịwanye elu.
N'ime afọ ole na ole gara aga, Oppo lekwasịrị anya n'ire igwe dị n'etiti na nke dị elu na usoro R. R17 na-abịanụ na R17 Pro ga-abụ ngwaọrụ mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ iji buru ọgbọ nke isii Corning Gorilla Glass na ihe mmetụta mkpịsị aka ejiri ihuenyo. N'ime data ndị ọzọ, a na-akwado R17 site na a Snapdragon 670 processor na 25 megapixel n'ihu igwefoto.
Oppo R17 nwere igwefoto igwefoto abụọ nwere ọgụgụ isi wuru ewu, ma ọ bụrụ na asịrị ahụ bụ eziokwu, R17 Pro ga-enwe ese foto atọ dị elu.
Na Oppo 17 Pro ga - enwe injin AI nke ejikọtara ya na teknụzụ nwere ọtụtụ igwe iji weghara onyonyo na-enwu gbaa na ọnọdụ gbara ọchịchịrịNa mgbakwunye, a ga-ejikwa ya na njigide onyonyo anya. N'ezie, data a niile ka dị n'ikuku ma anyị na-eche izu ọzọ maka ụlọ ọrụ iji kwado ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo R17 Pro ga-enwe igwefoto igwefoto atọ na teknụzụ TOF